Faayilii Maykiroosoftii Ofiisii banuu
Faayilii - Banuu filli. Qaaqa faayilii bani kan LibreOffice keessaa faayilii Maykiroosoftii Ofiisii fili.
Faayilii MS Ofiisii...
...moojuulii LibreOfficetiin bana
Faayilii akka Maykiroosoftii Ofiisiitti olkaa'uu
Faayilii - Olkaa`i Akka fili.
Sanduuqa Akkaakuu faayilii keessaa, dhangii faayilii Maykiroosoftii Ofiisii fili.
Galmeewwan duraantoon dhangii Maykiroosoftii Ofiisiitiin olkaa'uu
Naannoo Dhangii faayilii durtii, jalqaba irratti akaakuu galmee fili, itti aansiiti akaakuu faayilii ittiin olkaa'amu fili.
Amma booda, galmee yoo olkeesse, Akaakuu faayilii akka filannooketti qindaa'a. Yoo barbaadde ammallee akaakuu faayilii gara biraa kan qaaqa faayilii olkaa'i keessaa filachuu ni dandeessa.
Faayiloota duraantoon Maykiroosoftii Ofiisiitiin banuu
Aloolaa Foddaawwanii keessa, akaakuu faayilii fayyadamaa biroof ramaduu barbaadde mirga cuqaasi.
Tarree fayyadamtootaa keessaatti, sagantaa faayiloota akaakuu ammee banu fili. " Yeroo hunda sagantaa kana fayyadami" filatamu isaa hanqii ta'i.
Yoo dhawatoonni kun akaakuu Maayikroosooftii Wiindoosii kee irratti hin dalagamne, Gargaarsa Maayikroosooftii Wiindoosii kee barbaadi ajajoota waldoonni faayilii akkamitti akka jijjiiramuf.
Faayiloota Maykiroosoftii Ofiisii hedduu gara OpinDokumentiitti jijjiiruu
Masaka Jijjiiraa Galmeen faayiloota Maykiroosoftii Ofiisii hundaa kan ukaankaa sana keessa jiran gara galmeewwan LibreOffice dhangii faayilii OpenDokumentiitti galagalchee jijjiira. Ukaankaa dubbisuu barbaaddu fi ukaankaa bakka faayiloonni jijjiiraman itti olkaa'aman ifteessuu ni dandeessa.
Maskicha eegalsiisuuf Faayilii - Masakoota - Jijjiiraa Galmee fili.
Maakroota Maykiroosoftii Ofiisii fi LibreOffice keessaa
Quxaala xiqqoo wajjin, Maykiroosoftii Ofiisii fi LibreOffice lakkaddaa maakroo tokko ta'e hin kaasani. Maykiroosoftii Ofiisiin lakkaddaa VBA (Visuuwaal Beesikii Fayyadamootaaf) fayyadama, LibreOffice immoo lakkaddaa Beesikii qeeyyaa LibreOffice API (Apilikeeshinii Proograamii Interfeesii) fayyadama. Afaan sagantaa lamaan isaanii fayyadaman tokko ta'u illee, wantoota fi toftaalee isaan fayyadaman garaa gari.
Maakroota fayyadama tokkoof erga fayyadamte booda isuma deebistee fayyadama biraaf fayyadamuu yoo barbaadde, maakroota sana gulaaluu qabda. LibreOfficen maakroota faayiloonni Maykiroosoftii Ofiisii ofkeessatti qabatu fe'uu fi lakkaddaa maakroota kan gulaalaa LibreOffice Bu'uura IDE keessa jiran gulaaluu ni danda'a.
Maakroota VBA akka jiranitti dhiisuu ykn haquu ni dandeessa
Galmee Maykiroosoftii Ofiisii kan lakkaddaa maakroota VBA ofkeessatti qabatu bani. Qabeentoota baratamoo(barruu, man'eewwan, Saxaatoo) qofa jijjiiri, maakroota hin gulaaliin. Galmicha akka akaakuu faayiloota Maaykiroosoftii Ofiisiitti olkaa'i. Faayilii Maaykiroosoftii Ofiisii keessatti baniitii, maakroonni VBA akkuma duraaniitti ka'u.
Maakroota VBA yeeroo fe'amu ykn olkaa'amu faayilii Maykiroosoftii Ofiisii irraa haquu danda'ama.
Galmeewwan dhangiiwwan birootiin ol kaa'aman banuu
Galmeewwan Dhangiiwwan birootiin Ol kaa'uu
Title is: Maykiroosoftii Ofiisii fi $[officename] fayyadamuu